တပ်မတော်နေ့ ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်အရှက်တကွဲ ဖြစ်စေတယ်လို့ ဗြိတိသျှသံအမတ်ပြော - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဒီကနေ့ တပ်မတော်နေ့ ဆန္ဒပြမှုတွေကို နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် ကလေးငယ်တွေအပါအဝင် ပြည်သူတွေသေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဗြိတိသျှသံအမတ် ဒန်ချက်ကကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
"မြန်မာ့တပ်မတော်နေ့မှာ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်နေခြင်းအားဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့‌တွေဟာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်‌စေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးသူငယ်တွေအပါအ၀င် အပြစ်မဲ့ပြည်သူ အမြောက်အများအသက်ဆုံးရှုံး‌နေရပါတယ်။
စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအပြင် ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာပဲ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားနဲ့ တရားလက်လွတ်သတ်ဖြတ်နေတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ စစ်တပ်ရဲ့ ဦးစားပေးကိစ္စတွေ ဖြစ်ကြောင်း အထင်အရှားသက်သေခံလျက်ရှိပါတယ်။" - ဗြိတိသျှသံအမတ် ဒန်ချက်
"On Myanmar’s Armed Forces Day, the security forces have disgraced themselves by shooting unarmed civilians. Dozens of innocent people have reportedly been killed, including children.
"Atatime of economic crisis, Covid, andaworsening humanitarian situation, today’s military parade and extra-judicial killings speak volumes for the priorities of the military junta." - British Ambassador Dan Chugg